Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – HADAL MURTI LAGA WAAYAY WAA HEES CARUUREED: JAWAAB U SOCOTA MOHAMED MUUSE BUCUL OO ZEILAC KA HADLAY
HADAL MURTI LAGA WAAYAY WAA HEES CARUUREED: JAWAAB U SOCOTA MOHAMED MUUSE BUCUL OO ZEILAC KA HADLAY
Jan 05, 2013 ENTERTAINMENT 0
Bucul wucxuu yidhi “ Isagoon Madaxwaynuhu Hoos U Eegin Arintayadii Ayuu Amar Ku Soo Bixiyey….. Lagu Dhaariyo, ….halbeegnews 4tii bishan.
Ninkan waxa akhritayaashu ka sugayeen inuu sababo u sheego siday wax u dhaceen Oo ah dhacdooyin iyo caddayn (proof) hadduu wax ka sheegayo doorashada Zeilac. Inta badan waxabu ka hadlayaa wax mawduucaba ka baxsan oo ah dumarkiisa jooga Birmingham UK oo uu mahad u dirayo. Haddana wuxuu ku xoqanayaa nin aan meeshaba shaqo lahayn oo la yidhaa Cabdiraxmaan Zeilici. Maah maah somaliyeed baa ahayd, Nin daad qaaday xumbo cuskay.
Bucul iyo akhristayaasha garaadkooda iyagu iska leh, waxan halkan si kooban uga tusayaa madhnaanta hadallada Mohamed Muuse Bucul. Waana kuwan:
1. Doorashada Zeilac waxa majaraheega hayay oo madax ka ahaa niman ciise ah. Guddoomiyaha guddiga komishanka, Badhasaab, Mayor. Axsaabtii ku tartamaysayna way fadhiday. Cabdirahman Zeilici dadka intaa leeg oo ciise iyo cid walba leh xagguu ka soo maray?
2. Laba todobaad dad bay ka soo gurayeen Jabuuti, taambuugyo, booyado biyo ah, cunto iyo saad kaleba. Dadkii Jabuutidii ee la soo raray muxuu Cabdiraxmaan Zeilici ugua hadli waayay hadduu dadkiisa u hiilinayo?
3. Weli addunka meel ay ka dhacday miyay jirtaa in dad intaa leeg xuduud waddan kale lagu soo rogo si ay uga codeeyaan ? Jabuuti kala badh baa la soo raray oo todobadaa qof keenay, la’aantoodna maxay noqon lahayd?
4. Akhristayaasha waxan waydiinaynaa , arrimahaa markaan eegno, doorashada Zeilac ma Xaaraan jirtay bay Xalaal ka dhigtay? Mise iyadaa xaaraan ahayad?
Bucul waxa ka muuqata inuu yahay dadkii beenta loo sheegay ee da’da yaraa. Dadkaasi qaarkood waxay ku kureen mansabyo aanay xaqiiqdooda garanayn. Mansaybyada uu Bucul ku soo barbaaray waxay ahaayeen kuwo Xaaraan ah. Waxanay ka soo baxeen jeebkii Dahir Rayale. Hadal iyo dhammaantii taariikhda Zeiklac oo Kooban aan wax yar ka iftiimiyo:
2. Zeilac waa xaruntii Boqortooyada Ingiriisku iyo Suldaanada Samaroon heshiiska kula saxeedeen markay taariikhdu ahayd Disambar 11, 1884 . wakiilkii Ugaska Gadabursi, Elmi warfaa iyo Salaadiinta Samaroon heshiiskii taariikhiga ahaa, The Gadabursi Treaty, ayaa halkaa ka dhacay? Halkuu Ciised joogay?. Taariikhdaa fog ilaa maanta waa xarun samaaroon.
Mahamed Muse Bucul wuxuu ka mid ahaa maamulkii xaaraanta ahaa ee ka soo baxay jeebka Dahir Rayale ee doorashadani xalaalaysay. Haddaba mr. Bucul waxan kula talin lahaa inuu Dahir Rayale raadiyo. Dahir wuxuu degaa Qulujet halkaasuu hal bloodh oo dhul ka siin lahaa Bucul.
Wax saqiira oo laga samraa ubadka uun maaha reer awdal waxa ka saqiiray siyaasinta ee ilahay samir iyo imaan ha inaga siiyo aamin aamin.... Dardaarankii Iyo Erayaddii Ugu Dambeeyey Ee Ka Soo Baxa Afka Shahiidkii U Dhintey Qadiyadda Saylac.